गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव डा. हेमराज शर्माको कदमको सर्बत्र स्वागत र पालना !!! - Himalayamail.com
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव डा. हेमराज शर्माको कदमको सर्बत्र स्वागत र पालना !!!
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बसेर नेपालका पार्टीमा राजनीति गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढ़ी पदाधिकारीहरुले आफू आवद्ध राजनीतिक दल तथा दलका भातृ संगठनको जिम्मेबारी छोडेकाछन्। यसअघि संघका पदाधिकारीहरू राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनमा सक्रिय भएको पाइएपछि संघले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुई साताभित्र पद छोड्न चेतावनी दिएको थियो।
संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनमा पद लिएका पदाधिकारीहरूले तुरुन्त राजीनामा नदिए एनआरएनएबाट निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
उनले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध पदाधिकारीलाई आफू संलग्न भएको संगठन पदबाट राजीनामा दिएको स्वः घोषणा गरी फेब्रुअरी २५ सम्म यसको लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए।
त्यस्तै पार्टीका भातृ संगठनको पद छाड्ने मध्येका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ देखि लिएर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका छन्। अर्का हुन् केन्द्रीय सह–कोषाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहाल। उनी नेकपा निकटको प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेल्जियमको कार्यसमितिमा थिए। उनी पनि संघको चेतावनीपछि नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेल्जियमको कार्यसमितिबाट बाहिरिएको संघलाई जानकारी गराएका छन्। उनले पनि आफूलाई नेकपाले जानकारी नै नगराई कार्यसमितिमा राखेको एनआरएनए आईसीसीको बैठकमा बताउँदै आएका थिए।
आफ्नो पार्टी पद बाट राजीनामा दिएकी अर्की नेतृ हुन् केन्द्रीय सदस्य अनुजा प्रधान। अनुजा बेल्जियमस्थित नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको कार्यसमिति सदस्यमा थिइन्। उनले सार्वजानिक रूपमै जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको कार्यसमितिको सदस्य पद त्याग गरेको घोषणा गरेकी हुन्।
त्यस्तै पार्टी पद छाड्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य हुन् गोपिकृष्ण काफ्ले। एनआरएनएका क्यानाडाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका काफ्ले नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यसमिति सदस्य थिए। जानकारीअनुसार काफ्लेले शुरुमा पार्टी छाड्न इन्कारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा पार्टी छाड्ने निणर्यमा पुगेका हुन्।त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य यमुना भट्टराईले पनि आफू आवद्ध नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अमेरिकाको कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएकी छिन्।त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रमोद सिटौलाले नेपाली काँग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको कार्यसमितिबाट अलग भएको बताएका छन्। बेलायतबाट नेकपा निकट प्रवासी एकता मञ्चको कार्यसमितिमा रहेकी सुशिला राईले पनि पार्टी त्याग गरेकी छिन्।
गत जनवरी १८ र १९ मा पोखरामा बसेको आईसीसीको प्रत्यक्ष बैठकमा नै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले त्यस्ता पदाधिकारीलाई तुरुन्त राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर, बैठकको निणर्यलाई अटेर गर्दै केही पदाधिकारीहरू पार्टीका भातृ संगठनमा सक्रिय भएपछि संघले त्यसका विरुद्ध कडा एक्सन लिने जनाएको थियो।
राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध पदाधिकारीलाई आफू संलग्न भएको संगठन पद बाट राजीनामा दिएको स्वः घोषणा गरी यसको जानकारी फेब्रुअरी २५ सम्म लिखित जानकारी दिन भनिएको थियो। तर, यसबारेमा संघले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा पनि जम्मा २० प्रतिशत मात्रैले दलका संगठनमा संग्लन्न भएको पाइएको छ। त्यसमध्ये धेरै जसोले राजीनामा दिइसकेको बताइएको छ। कतिपयलछलफल गर्नु पर्ने भएकोले केही थप समय माग गरेको बताइएको छ।
संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ मा संघको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक, जातिय र धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यमा पदभार ग्रहण पाइँदैन।
एनआरएनएले आफूलाई विशुद्ध गैरराजनीतिक संस्था दावी गर्दै आएपनि संस्थाका गतिविधि र पदाधिकारीको राजनीतिका कारण पछिल्लो समय संघ विवादमा पर्दै आएको छ। संघको पछिल्लो चुनावमा समेत उम्मेदवारले राजनीतिक पार्टीहरुबाट खुल्ला रुपमै समर्थन लिएका थिए। संस्थामा राजनीतिक दलहरु हावी हुन थालेपछि महासचिबको यो कदमले संघ भित्र सुद्धीकरणहुने र सुधारको बाटोमा सहयोग गर्न सबैमा अपील गर्नु भएको छ ।